USihlalo weBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika Usabalalisa Umyalezo Wethemba eKilimanjaro
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » USihlalo weBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika Usabalalisa Umyalezo Wethemba eKilimanjaro
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Izindaba ZaseTanzania • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
USihlalo weBhodi Yezokuvakasha yase-Afrika Umyalezo Wethemba
Ephethe umyalezo wethemba wokuthuthukiswa kwezokuvakasha e-Afrika, uSihlalo we-African Tourism Board (ATB) uCuthbert Ncube uvakashele iNtaba iKilimanjaro, isiqongo esiphakeme kunazo zonke e-Afrika, ehambisana namanxusa abalulekile ebhodi lakhe.
USihlalo we-ATB ubeseNyakatho neTanzania kusukela ngesonto eledlule, ebambe iqhaza kwiFirst East African Regional Tourism Expo (EARTE) ephele ekuqaleni kwaleli sonto.
Ephelezelwa yithimba lamanxusa abalulekile e-ATB avela emazweni ahlukahlukene ase-Afrika, uSihlalo we-ATB uvakashele eMarangu, eNdlunkulu ye-Kilimanjaro National Park.
Baphinde bavakashela isango lokungena ohambweni lokuqwala intaba iMount Kilimanjaro.
The Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (i-ATB) Ukuhambela kukaSihlalo eMount Kilimanjaro bekukhombise ukuzibophezela kweBhodi ukuthuthukisa ezokuvakasha zase-Afrika, nokusabalalisa umyalezo wethemba lokuvuselelwa kwezokuvakasha ekubhujisweni ubhubhane lwe-COVID-19 kanye nengqikithi yokuthuthukiswa kwezokuvakasha esifundeni nakwamanye amazwe ase-Afrika.
INtaba iKilimanjaro nezindawo eziyizungezile ziphakathi kwezindawo ezihamba phambili eziheha izivakashi kwezokuvakasha ezifuywayo, zezifunda, nezangaphakathi kwe-Afrika lapho izinkulungwane zabantu abasuke beze ngamaholide bachitha amaholide kaKhisimusi noNyaka Omusha nemikhosi yePhasika.
I-Tanzania ikhanyise “i-Freedom Torch” edumile esicongweni seNtaba i-Kilimanjaro eminyakeni engama-60 eyedlule, okwakufanekisela ukuthi kukhanye ngale kwemingcele bese iletha ithemba lapho kwakukhona ukuphelelwa yithemba, uthando lapho kwakukhona ubutha, nenhlonipho lapho kwakukhona inzondo. Kepha kulo nyaka, abagibeli esiqongweni seNtaba iKilimanjaro, ngakho-ke njengeqembu le-ATB, bazothumela umyalezo wethemba lokuthi iTanzania ne-Afrika yindawo ephephile yezivakashi ngalesi sikhathi lapho umhlaba ulwa nobhadane lwe-COVID-19 ngokugonywa nangezinye izindlela zezempilo.
Ngemuva kokushiya iKilimanjaro, uSihlalo we-ATB kanye nethimba lakhe bavakashela iMkomazi National Park, okuwukuphela kwepaki yezilwane zasendle eMpumalanga Afrika. Etholakala eziNtabeni zasePare Arc's Eastern Arc, leli paki lingaphansi kokuphathwa kweTanzania National Parks (TANAPA) futhi lisendaweni engamakhilomitha ayi-120 empumalanga yedolobha laseMoshi esifundeni saseKilimanjaro phakathi kwamasekethe we-safari asenyakatho naseningizimu yeTanzania.
Obhejane bavikelekile ngaphakathi kwendawo ebiyelwe engamakhilomitha-skwele angama-55, engaphakathi kwepaki elingamakhilomitha-skwele angama-3,245. Izivakashi zingazibona kalula lezi zilwane ezincelisayo zase-Afrika ezinkulu kunalezo ezisemathafeni asendle. Obhejane abamnyama babejwayele ukuzula ngokukhululeka phakathi koMkomazi kanye ne-Tsavo ecosystem emboza iTsavo West National Park eKenya.
Ngokubambisana ne-Tsavo, uMkomazi wakha enye yezindawo zemvelo ezivikelekile ezinkulu emhlabeni. IMkomazi, ngasemfuleni i-Umba, ibamba izinkawu eziningi ezingavamile ezihamba phakathi kwamahlathi ayo asemifuleni. Ipaki inesimo sezulu esomile futhi esinephethini yokusabalalisa imvula ye-bimodal. Ipaki libuye licebe ngezinhlobo ezincelisayo. Zingaphezu kwezinkulungwane ezingama-450 izinhlobo zezinyoni ezirekhodwe epaki, kunezinhlobo zezimbali nezilwane eziyingqayizivele. Iphakathi kwezindawo ezimbalwa ezivikelekile eTanzania ezinabantu abaningi futhi ababonakalayo be-gerenuk kanye nokuhlushwa okukhulu kweBeisa Oryx. Leli paki lingelinye lamahlathi acebile e-Afrika futhi mhlawumbe emhlabeni ngokuya ngenani lezilwane nezimbali ezingavamile nezifakazelwa ubukhona bezinja zasendle nobhejane abamnyama.
Ngesikhathi evakashele eTanzania kusukela ngesonto eledlule, uMnu Ncube wethule Umklomelo we-ATB's Continental Tourism Award 2021 kuMongameli waseTanzania, uSamia Suluhu Hassan, ngokuhlonipha ukuzibophezela kwakhe ekuthuthukiseni ezokuvakasha zaseTanzania. Ukwethulwa komklomelo we-ATB kumongameli waseTanzania kwenzeke ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni iFirst East African Regional Tourism Expo (EARTE) ebibanjelwe edolobheni lezokuvakasha elisenyakatho neTanzania i-Arusha. UMongameli ubeqondise ekuhlanganiseni umqulu obizwa ngeRoyal Tour obubonisa izindawo zokuvakasha zaseTanzania, phakathi kweminye imizamo abeyithathe yena uqobo ukuthuthukisa ezokuvakasha eTanzania nase-Afrika.